‘Xhaka Wuu Joogayaa Arsenal’ – Arteta – Garsoore Sports
‘Xhaka Wuu Joogayaa…
‘Xhaka Wuu Joogayaa Arsenal’ – Arteta
Xiddiga reer Switzerland ayaa la filayay inuu Jose Mourinho kula kulmo Talyaaniga marka uu u wareego kooxda Roma – laakiin taasi inay dhacdo hadda suuragal uma eka.
Tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa xaqiijiyay in u dhaqaaqistii Granit Xhaka ee Roma meesha laga saaray – isla markaana uu filayo in cayaaryahankiisa khadka dhexe uu noqdo “xubin muhiim u ah” kooxda Arsenal xilli-cayaareeedka soo aaddan.
Horraantii xagaaga, xiddigan ayaa u muuqday inuu ku biirayo kooxda Roma ee uu hoggaamiyo macalin , inkastoo isbuucii hore ay soo baxeen warar sheegaya in Xhaka uu sii joogi doono Gunners.
Xhaka ayaa dhowaan kusoo laabtay tababarka kooxda kahor inta uusan gool ka dhalin cayaartii saaxiibtinimo ee Arsenal guuldarrada 2-1 ah ay kala kulantay Chelsea, iyadoo Arteta uu warbaahinta la hadlay kaddib cayaartii axadda.
“Granit [Xhaka] ayaa nala joogi doona. Wuxuu xubin muhiim ah ka yahay kooxdeena, ”Arteta ayaa xaqiijiyay.
Dhanka kale, tababaraha ayaa sidoo kale xaqiijiyay in dhaawac soo gaaray xiddiga khadka dhexe ee Thomas Partey intii lagu gudajiray kulanka uu walaac weyn ku hayo Gunners.
“Waqtigan xaadirka ah, uma fiicna maxaa yeelay wuu xanuunsanayay mana uusan sii wadan karin,” ayuu ka yiri xiddigii hore ee Atletico Madrid kaasoo lagu qasbay inuu garoonka ka baxo shan daqiiqo kahor qeybtii hore ee kulankii Emirates.
Chelsea Oo Guul Gunners Kaga Gaartay Emirates Kulan Saaxiibtimo Oo Aad U Xiiso Badnaa
Harry Kane Oo Tababarkii Maanta Ee Tottenham U Gooyay